Mpanamboatra sy mpamatsy tady fanamafisam-peo socket type - China Socket Type voltage voltage stabilizer
Dingana telo fanamafisam-peo
Transformer ambony sy ambany
SDVC20-S 5A Material feno s ...
Fanaraha-maso feeder andriamby / ...
SDVC31-S / M 1.5A sy 3A Freq ...
TLCR (B) 600W Voltage stabilizer US socket
TLCR andiana dingana tokana US socket RELAY CONTROL AC mandeha ho azy regulator malefaka, izay tsotra sy maivana endrika manokana ary ampiasaina any amin'ny firenena amerikana manokana. Mandritra izany fotoana izany dia misafidy mpanova efamira izay novokarantsika ho an'ny herinaratra kely indrindra isika, ambany dia ambany ny vidiny ary tena kely sy mora entina ny volany. Manana foibe famoahana efatra na valo izahay amin'ny fisafidianana ary mampifandray fitaovana maro ao anatin'ny indray mandeha izy io ary mandoa sarany. Namokatra ny birao pcb vaovao avy aminay sy ny choos ...
TLCR (A) US socket type stabilizer miorina amin'ny endriny manjelanjelatra
TLCR andian-dahatsoratra tokana sokajy amerikana atsimo RELAY CONTROL AC mandeha ho azy regulator malefaka, izay tsotra sy maivana endrika manokana ary ampiasaina any amin'ny firenena amerikana manokana. Mandritra izany fotoana izany dia misafidy mpanova efamira izay novokarantsika ho an'ny herinaratra kely indrindra isika, ambany dia ambany ny vidiny ary tena kely sy mora entina ny volany. Manana foibe famoahana efatra na valo izahay amin'ny fisafidianana ary mampifandray fitaovana maro ao anatin'ny indray mandeha izy io ary mandoa sarany. Namokatra ny birao pcb vaovao avy amin'i ourselv ...
TLCR-300-600 USA sobat regulator karazana socket
TLAR Universal socket type sobat regulator
TLAR andian-dingana tokana Universal socket RELAY CONTROL AC mandeha ho azy stabilizer stabilizer, izay no lohalaharana voafantina ny Amerikanina puce ny orinasa, mampiasa ny solosaina digitalization fomba mba hifehezana ny miasa hetsika ny milina iray manontolo. Nanatsara ny lesoka marobe momba ny stabilizer volavola namboarina taloha ary nahatonga ny kalitaon'ny vokatra ho azo itokisana kokoa, ny fampisehoana ho marin-toerana kokoa, ny asa ho mahatahotra kokoa. Ny vokatra dia manana fanjifana angovo ambany ...
TLBR 2000VA LED relay Euro socket regulator mandeha ho azy
TLBR andian-dahatsoratra tokana socket Eoropeana RELAY CONTROL AC mandeha ho azy stabilizer stabilizer, dia fitaovana famatsiana herinaratra taht afaka manitsy avy hatrany ny output output. mametraha hatezerana, ka ny boriborintany isan-karazany na ny herinaratra elektrika, ny fitaovana dia afaka miasa ara-dalàna eo ambanin'ny haavo miasa naoty. Ny voltizer stabilizer dia be mpampiasa amin'ny faritra misy ...
Address Faritra indostrialy Xiangyang, Tanàna Liushi Yueqing City, Zhejiang, Sina
Phone +86 0577 62706765
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday Fanamafisana ny dizitaly ho an'ny Ac, Voltage Stabilizer 5000va, Voltage Stabilizer ho an'ny amplifier, 4kva Voltage Stabilizer, 2kva Voltage Stabilizer, Fanamafisam-peo ho an'ny trano rehetra, Vokatra rehetra